Fight for Tendai Mtawarira: Nick Mangwana vs Douglas Mwonzora |
Fight for Tendai Mtawarira: Nick Mangwana vs Douglas Mwonzora. There was drama on social media as we watched two MPs or should l say prominent names in the political circle as Zanu PF’s Nick Manggwana fought with MDC’s Douglas Mwonzora over World Cup winner Tendai Beast Mtawarira.
Nick Mangwana first Tweeted a tweet saying England couldn’t hold the Beast hence they were beaten by South Africa in the Rugby World Cup final. Douglas then thwarted Nick Mangwana’s tweet saying, Nick Mangwana shouldn’t be too much happy as Tendai Mtawarira was not a Zanu PF supporter. Here is the Twar below…
And it escalated…
And led up to this…
Related Topics:Douglas MwonzoraNick MangwanaTendai 'Beast' Mtawarira
More doctors to be fired next week